Mon, Sep 21, 2020 at 9:30pm
काठमाडौं, ५ असाेज । नेपालमा मिस्टर एण्ड मिस टिकटककाे आयोजना हुने भएको छ । साे प्रतियाेगिताले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नयाँ र प्रातिभावान् कलाकार भित्र्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएकाे छ । प्रतियोगीहरूले अभिनय गरेको भिडियो टिकटकमा अपलोड गरेर त्यो भिडियो प्रतियोगितामा पठाउनु पर्नेछ । आगामी २९ सेप्टेम्बरसम्म प्रतियोगीहरूले सहभागिता जनाइसक्नु पर्ने आयोजक द जीएमआईले जनाएकाे छ । प्रतियाेगिताकाे निर्णायक मण्डलमा अभिनेत्री प्रियंका कार्की, हास्य अभिनेता किरण केसी र..
एजेन्सी, ५ असोज । बलिउड एवं हलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा ‘ओस्कार २०२१’मा छनौट हुदैछिन् ? भन्ने प्रश्न सबैको मनमा उठिरहेको छ । अभिनेत्री प्रियंकाको मेट्रिक्स, द ह्वाइट टाइगर, सिटाडेललगायत फिल्महरु ब्याक टु ब्याक आउने तयारीमा छन् । त्यसोत, उनको आगामी नेटफ्लिक्स फिल्म द ह्वाइट टाइगरबाट प्रियंकालाई बेस्ट सपोर्टिङ रोल एक्ट्रेसको रुपमा ओस्कार नोमिनेशन मिल्ने आशा गरिएको छ । वैराइटीले भर्खरै मात्र एकेडमीलाई..
काठमाडौं, ५ असोज । अभिनेत्री पायल घोषले निर्देशक अनुराग कश्यपलाई यौन शोषणको आरोप लगाएकी छन् । तर, निर्देशक अनुरागले अभिनेत्री पायल घोषको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको भन्दै खण्डन गरेका छन् । यसैबीच अभिनेत्री पायल घोषले उक्त घटनाको पूरा विवरण नै प्रस्तुत गरेकी छन् । अभिनेत्री पायलले भनेकी छन्, ‘अनुरागले मलाई लाइब्रेरीमा लगेर आपत्तिजनक भिडियो देखाएका थिए ।’ भारतीय सञ्चार माध्यमसँग कुराकानी गर्दै..
काठमाडौं, ४ असोज । बलिउडका ‘मुन्ना भाई’ सञ्जय दत्त आफ्नो करियरलाई लिएर निकै गम्भीर रहन्छन् । जस्तोसुकै ठूलो चुनौती भएपनि अभिनेता सञ्जय दत्तले आफ्नो करियरलाई असर पार्न दिदैनन् । हाल उनी क्यान्सर रोगसँग जसधिरहेका छन् । क्यान्सरसँग लडिरहेका अभिनेता सञ्जय दत्तले आफ्नो हर फिल्मलाई पूरा गर्न चाहन्छन् । उनले आफू उपचारमा जानु अगाडि नै सबै फिल्मको काम पूरा गर्न चाहन्छन् । जनकारी..
काठमाडौं, ४ असोज । बलिउड अभिनेत्री पायल घोषले निर्देशक अनुराग कश्यपमाथि यौन–शोषणको आरोप लगाएकी छन् । अभिनेत्री पायल घोषले सोसल मिडिया ट्वीटरमार्फत् निर्देशक अनुराग कश्यपले यौन शोषण गरेका आरोप लगाएकी हुन् । साथै उनले आफ्नो ट्वीटर पोष्टकै माध्यमबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गुहार पनि मागेकी छन् । त्यस्तै, उनले आफ्नो सुरक्षा खतरामा रहेको पनि जनाएकी छन् । अभिनेत्री पायलले ट्वीट गर्दै लेखेकी छन्,..
काठमाडौं, ४ असोज । महानायक राजेश हमालले कोरोना महामारी रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण समस्यामा परेमा १ सय १३ जना चलचित्र प्राविधिकहरुलाई आर्थिक सहयोग गरेका छन् । शनिबार (हिजो) नेपाल प्राविधिक संघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमकाबीच महानायक हमालले जनही पाँच हजार रुपैयाँका दरले १ सय १३ जना प्राविधिकहश्रलाई सहयोग गरेका हुन् । नेपाल प्राविधिक संघका अनुसार..
एजेन्सी । बलिउडका दिवंगत अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुत आत्महत्या प्रकरणमा तीन ठूला छानबीन एजेन्सीहरुले अनुसन्धान जारी राखेका छन् । जसमा हरेक दिन नयाँ-नयाँ खुलासाहरु बाहिर आइरहेका छन् । केसमा लागुऔधषको सम्बन्ध जोडिएसँगै लगातार पक्राउ पर्नेहरुको संख्यामा पनि वृद्धि आएको छ । यसैबीच मुजफ्फरपुर जिल्ला अदालतले सलमान खान र करण जौहरसहित ८ हस्तीहरुलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । जसमा सलमान र..
मुम्बई, ३ असाेज । बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतकाे आत्महत्या प्रकरण भारतमा अहिले ठूलाे बहसकाे विषय बनेकाे छ । भारतीय संचारमाध्यम शुसान्तको घटनालाई दैनिक जसो मुख्य समाचार बनाइरहेका छन्। केहि कलाकारहरु यसबारे खुलेर बाेलिरहेका छन् भने काेहि माैन छन् । अभिनेत्री कंगना रणावतले शुसान्तको आत्महत्याको कारण बलिउडमा व्याप्त नातावाद भएको बताउँदै चलचित्र माफियाहरुको चर्को आलोचना गरिरहेकी छिन्। सुशान्तको आत्महत्याको विषयले बलिउडमा नातावाद र क्रिपावाद हाबी भएको..
मुम्बई, २ असाेज । बलिउड अभिनेत्री सिल्पा सेट्ठीमाथि ठगिकाे आराेप लागेकाे छ। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी र उनका पति राज कुन्द्राविरुद्ध ठगीको आरोपमा प्रहरीमा उजुरी परेको हाे। दुबैविरुद्ध सुनको अफर प्रकरणमा एक लगानीकर्ताले ठगीको आरोप लगाउँदै प्रहरीमा उजुरी दिएका हुन्। एनआरआई सचिन जोशीले खार पुलिसमा हालै शिल्पाको दम्पत्तीविरुद्ध उजुरी दिएका छन्। उजुरीमा शिल्पा दम्पत्ती आबद्ध सतयुग गोल्ड प्रालिले ठगेको जोशीको आरोप छ। आफूमाथि ठगीको आरोप..
काठमाडौं, २ असोज । बलिउडकी क्वीन कंगना रनौतले मुम्बईस्थित भत्काइएको आफ्नो अफिसको तस्वीर सेयर गरेकी छन् । अभिनेत्री कंगनाको उक्त अफिसको केही भागलाई पछिल्लो साता मात्रै बृहन्मुम्बई नगर निगम (बीएमसी)ले अबैध निर्माण भन्दै भत्काएको थियो । अभिनेत्री कंगनाले भत्काइएको आफ्नो अफिसको तस्वीर सेयर गर्दै ट्वीटमा लेखेकी छन्, ‘यो बलात्कार हो, मेरो सपनाको, मेरो हौसलाको, मेरो आत्मसम्मानको र मेरो भविष्यको ।’ त्यस्तै, अभिनेत्री..
काठमाडौं, २ असोज । बलिउड अभिनेत्री राजेश्वरी सचदेवलाई पनि कोरोना संक्रमण भएको छ । अभिनेत्री राजेश्वरी आफैले सोसल मिडिया इन्स्टाग्राममार्फत् आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको जानकारी गराएकी हुन् । उनले इन्स्टाग्राममा भनेकी छन्, ‘ हेल्लो ! मेरो पनि कारोना रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । म’मा केही लक्षणहरु देखा परेको छ । अहिले होम आइसोलेशनमा बसेकी छु । अहिले म डाक्टरको निगरानीमा छु..
मुम्बई, ३० भदाै । जिल्ला एवं सत्र न्यायालय जोधपुरले बलिउड अभिनेता सलमान खानलाई २८ सेप्टेम्बरमा पेश हुन आदेश दिएको छ । सोमबार सलमानको याचिकामा कालो हरिण शिकार प्रकरण र राज्य सरकारको याचिकामा हातहतियार सम्बन्धि मुद्दाको सुनुवाई पूरा हुन सकेन तसर्थ सलमानलाई अर्को सुनुवाईमा अदालतमा आफैं पेश हुन आदेश दिइएको हाे । सलमान २८ सेप्टेम्बरमा जोधपुर अदालतमा पेश हुनुपर्नेछ । यस्तोमा सलमान उपस्थित हुनेछन्..
काठमाडौं । नेपालमा पनि कोरोना महामारीले गर्दा फिल्महरु हलमा लाग्न सकिराखेका छैनन् । छिमेकी राष्ट्र भारतमा बलिउड फिल्महरुले डिजिटल प्लाटफर्म रोज्दै प्रदर्शन भइरहेका छन् । यसैक्रममा इशान खट्टर र अनन्या पाण्डे अभिनित फिल्म 'खाली पिली' २ अक्टुबरमा जी प्लेक्स र जी फाइभमा रिलिज हुँदैछ । यता नेपालमा पनि पहिलोपटक डिस होममार्फत यो फिल्मरि लिज हुने भएको हो । अक्टुबर २ तारिखमा नै..
एजेन्सी । बलिउडका निर्देशक राज सान्डिल्यलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । हल्का खोकी र रुघा लागेपछि उनले कोरोना परीक्षण गरेका थिए । मिडिया रिपोर्ट अनुसार कोरोना परीक्षणमा उनको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो । उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जनाइएको छ । उनी लकडाउनको समयमा झाँसीस्थित घरमै थिए । केहीदिन अघि पत्नीसहित मुम्बई आएका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा यसको जानकारी दिँदै आफूलाई..
काठमाडाैं, २५ भदाै । कोभिड १९ को महामारी शुरू भएसँगै रोकिएको चर्चित टिभी कार्यक्रम ‘कौन बनेगा करोडपति’ पुनः शुरू हुने भएको छ । काेराेना कहरबीच नै बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनले कार्यक्रमको शूटिङ शुरू गरीसकेका छन् । सामाजिक सञ्जाल इन्स्ट्रागाममा एक तस्वीर शेयर गर्दै अमिताभले लेखेका छन्,‘सुरक्षित रहौं, काम जारी छ ।’ उनले शेयर गरेको तस्वीरमा देख्न सकिन्छ, अमिताभ कम्यूटरको अगाडि आफ्नो अनुहार..
मुम्बई, २५ भदाै । अवैधरूपमा निर्माण गरिएको भन्दै मुम्बईस्थित कंगना रनौतको अफिसमा महानगरले डाेजर चलायाे । अफिसको शौचालय, किचेन, पार्किङस्थल अवैध निर्माण गरेको भन्दै मुम्बई महानगरले भत्काएको थियो। उक्त कदमको बलिउडकर्मीहरूले विरोध गरेका छन्। यदि अवैध नै थियो भने पनि रातारात तोडफोड गर्नुपर्ने अवस्था अत्यन्तै निन्दनीय भएको उनीहरूको ठहर छ। यस्तै मुम्बई उच्च अदालतलेसमेत रातारात तोड्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो भन्दै महानगरलाई जवाफ..
काठमाडाैं, २४ भदाै । नेपाली चलचित्र निर्देशक छेतन गुरुङको निधन भएको छ । मंगलबार राति मेट्रो हस्पिटल महाराजगंजमा उनको निधन भएको हो । लिभरमा समस्या भएका छेतेन २ दिनअघि हस्पिटल भर्ना भएका थिए । उपचारको क्रममा नै उनको निधन भएको ‘प्रेम गीत’ निर्माता सन्तोष सेनले जानकारी दिए । सन्तोषका अनुसार बिहीबार छेतनको अन्तेष्टि गरिने छ । ‘नोभेम्बर रेन, क्लासिक, ए मेरो हजुर ३’ जस्ता सफल..
मुम्बई, २४ भदाै । चेतावनीलाई चुनाैती दिँदै बलिउड अभिनेत्री कंगना रनौट आफ्नो बोलीअनुरुप आज (सेप्टेम्बर ९) मुम्बईका लागि निस्किएकी छिन् । उनी आफ्नो घर मनालीबाट सुरक्षासहित मुम्बईका लागि निस्किएकी छिन् । उनी दिउँसोसम्म मुम्बई पुग्‍ने नवभारत टाइम्सले जनाएको छ । कंगना स्वयंले पनि मुम्बईका लागि निक्किन लागेको जानकारी ट्विटरमार्फत दिएकी छिन् । निडर कंगनाले ट्विटरमा लेखेकी छिन्, “न डराउँछु, न झुक्छु । गलतको विरुद्ध आवाज उठाइरहन्छु..
एजेन्सी । तेलेगू फिल्मका चर्चित अभिनेता जय प्रकाश रेड्डीको निधन भएको छ । हृदयघातका कारण मंगलवार बिहान उनको निधन भएको हो । आन्ध्र प्रदेशको गुन्टुरुमा उनको हृदयघातका कारण अचानक निधन भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् । उनी धेरै जसो कमेडी रोलका लागि चिनिने गर्थे । उनले व्रह्मापुत्रबाट आफ्नो फिल्मी करियर शुरु गरेका थिए । Telugu cinema and theatre has lostagem today with..
सोमबार, भाद्र २२, २०७७ साल
मुम्बई, २२ भदाै । बलिउड नायक अर्जुन कपुरलाई काेराेना संक्रमण पुष्टी भएकाे केहि समय नबित्दै उनकी प्रेमिका मलाइका अराेडालाई पनि काेराेना संक्रमण देखिएकाे छ ।भारतीय मिडियामा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार अर्जुनकी प्रेमिका मलाइका अरोडाको कोभिड–१९ को रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हाे । मलाइका आफैंले खबर पुष्टि गर्दै भनिन्, ‘हो, परीक्षण गर्दा मेरो नतिजा पोजेटिभ आएको छ । म सेल्फ आइसोलेशनमा छु र म स्वस्थ..
मुम्बई, २१ भदाै । बलिउड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतको आत्महत्या प्रकरणमा उनका घरेलु कामदार पनि पक्राउ परेका छन्। सुशान्तका घरेलु सहायक दिपेश सावन्तलाई खगिरफ्तार गरेको हो। यसअघि टोलीले सुशान्तका पूर्व म्यानेजर र प्रेमिका भनिएकी अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीका भाइलाई गिरफ्तार गरेको थियो। एनसीबी डेपुटी डाइरेक्टर केपीएस मल्होत्राले सुशान्तका घरेलु सहायक दिपेश सावन्तलाई ड्रग्स किन्ने र त्यसको लेनदेनको मामलामा गिरफ्तार गरिएको जानकारी दिएका छन्।उनलाई डिजिटल प्रमाण..
मुम्बई, २० भदाै । भारतीय अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुत मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले उनकै प्रेमिका रिया चक्रवर्तीका भाइ र सिंहका व्यवस्थापकलाई पक्राउ गरेको छ। घटना अनुसन्धानका क्रममा अभिनेत्री रियाका भाइ शौविक चक्रवर्ती र सिंहका व्यवस्थापक श्यामुअल मिरान्डालाई नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरो (एनसीबी) को टोलीले गिरफ्तार गरेको हो। बीबीसी हिन्दीका अनुसार अभिनेता सुशांत सिंह राजपुतको मृत्यु प्रकरणमा यो पहिलो गिरफ्तार हो। घटनाबारे सीबीआईले अनुसन्धान गरिरहेको..
एजेन्सी । हलिउड स्टार रोबर्ट प्याटिन्सनलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनलाई कोरोना संक्रमण भएपछि उनी अभिनित फिल्म 'द ब्याटम्यान'को सुटिङ स्थगित गरिएको छ । वार्नर ब्रदर्सका प्रवक्ताले एक बयान जारी गर्दै ‘ब्याटम्यान प्रोडक्सनका एक सदस्यमा कोरोना पोजेटिभ पाइएको जानकारी दिएका थिए ।’ मार्चमा भएको लकडाउनपश्चात् तीन दिन अघि मात्रै ‘द ब्याटम्यान’ को सुटिङ सुरु भएको थियो । कोरोनाभाइरस महामारीका कारण लागू..
मुम्बई, १९ भदाै । बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको निधन भएको केही समय भइसक्दा पनि उनको विषयमा अनुसन्धानले नयाँ नयाँ क्लूहरु बाहिर ल्याइरहेको छ । यहीबीच सिबिआई टिमले अब उनको आत्महत्याको रहस्य पत्ता लगाउन विभिन्न अनुसन्धान गरिरहेको छ । सिबिआइले यसअघि उनकी गर्लफ्रेन्ड रिया चक्रवर्तीसँग निकै लामो सोधपुछ पनि गरिसकेको छ । यहीबीच आज भारतीय प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण विभागले रियाको घरमा छापामा मारेको..
हलिउड अभिनेता रोबर्ट प्याटिन्सनलाई कोरोना पुष्टी
एजेन्सी । हलिउड अभिनेता रोबर्ट प्याटिन्सन कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। बेलायतमा चलचित्र द ब्याटम्यानको छायांकनको क्रममा रहेका अभिनेता प्याटिन्सनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्रोतहरुलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। मार्चदेखि रोकिएको द ब्याटम्यानको छायांकन यहि हप्तामात्रै सुरु भएको थियो। प्याटिन्सनमा संक्रमण देखिएपछि पुनः छायांकन रोकिएको छ। सो चलचित्रको तीनमहिनाको छायांकन बाँकी रहेको छ। चलचित्र निर्माता कम्पनी वार्नर ब्रोजले बेलायतमा..
सीबीआईको निशानामा फेरि रिया, आजपनि बयान लिँदै
एजेन्सी । सुशान्त सिंह राजपुत आत्महत्या प्रकरणमा सीबीआईले रिया चक्रवर्तीसँग बयान लिने क्रम जारी राखेको छ । यसभन्दा पहिले सीबीआईले रियासँग शुक्रबार १० घण्टा र शनिबार ७ घण्टा सोधपुछ गरेका थिए । जसअनुरुप हालसम्म सीबीआईले २६ घण्टासम्म सोधपुछ गरिसकेको छ । यसका साथै सीबीआईले रियासँग बयान लिनका लागि आजपनि बोलाएको छ । रियाका अलावा यस प्रकरणमा ईडी गौरव आर्यासँग पनि आजै बयान..
सज्जा चौलागाईंले जितिन नेपाल आइडल सिजन-३ को उपाधि
काठमाडौं, १३ भदौ । नेपाल आइडल सिजन–३ को उपाधि सज्जा चौलागाईंले जितेकी छिन। शुक्रबार नेपाल आइडलको स्टुडियोमा भएको ग्राण्ड फिनालेमा सज्जाले उपाधि जितेकी हुन् । फस्ट रनरअप प्रवीण बेडुवाल भए भने सेकेन्ड रनरअपको उपाधि किरणकुमार भुजेलले बने । दर्शकले विश्वभरबाट दिएको भोट र निर्णायकको मूल्यांकनका आधारमा अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले नेपाल आइडलको विजेता घोषणा घोषणा गरे । मोरङ पथरीकी सज्जा..
क्यान्सर उपचारका लागि अमेरिका जान लागेका सञ्‍जयलाई पाँचवर्षे भिसा
एजेन्सी, १२ भदाै । केही साताअघि मात्रै फोक्सोको क्यान्सर पत्ता लागेका अभिनेता सञ्‍जय दत्त आगामी चरणको उपचारका लागि अमेरिका जाने तयारीमा छन् । यही सन्दर्भमा सञ्‍जयलाई पाँचवर्षे अमेरिकी भिसा प्रदान गरिएको छ । उनको प्रारम्भिक उपचार मुम्बईको कोकिलाबेन अस्पतालमा भइरहेको छ । श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उनलाई दुई दिनसम्म लीलावती अस्पताल भर्ना गराइएको थियो । कोरोना संक्रमणका कारण समस्या उत्पन्‍न भएको आशंकामा परीक्षण..
पूजा शर्मा र पल शाहको ‘पहिलो पल्ट भेट हुँदा’ म्युजिक भिडियाे सार्वजनिक 'भिडियाेसहित'
काठमाडौं, १२ भदाै । अभिनेता पल शाह र अभिनेत्री पुजा शर्मा अभिनित म्युजिक भिडियो ‘पहिलो पल्ट भेट हुँदा’ सार्वजनिक भएको छ । दिनेश थपलिया शब्द, अर्जुन पोखरेलको संगीत रहेको गीतमा सरोज ओली र रचना रिमालको स्वर रहेको छ । भिडियोमा छायाँकन नवराज उप्रेती, सम्पादन अमन मानन्धर, कलर श्याम कुँवरको रहेको छ भने निर्देशन कविराज गहतराजले गरेका छन् । ..
एजेन्सी । भिडियो हेर्न मिल्ने माध्यमको रुपमा रहेको युट्युबले यस बर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा एक करोड १४ लाखभन्दा बढी भिडियो हटाएको छ । कम्पनीको मापदण्ड तथा निर्देशिका विपरित रहेको ठहर गरिएका भिडियोहरु हटाइएको कम्पनीद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । भिडियोका बारेमा प्राप्त उजुरी र आफैँले गरेको मूल्याँकनका आधारमा ती भिडियोहरु हटाउनु परेको कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीका अनुसार यही वर्ष सन्..
Results 983: You are at page 1 of 33